Ọpa Sihlramide hydrochloride (84485-00-7) | Ndị na-emepụta AASraw
Sibutramine hcl (meridia) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Sibutramine hydrochloride ntụ ntụ
4.67 si 5 dabere na 6 ahịa Fim
Category: Ọla abụba Tags: Ọla abụba, meridia hcl ntụ ntụ, merida uzuzu, Sibutramine hcl ntụ ntụ, Sibutramine hydrochloride ntụ ntụ, Sibutramine ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Sibutramine hydrochloride powder (84485-00-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Sibutramine hydrochloride (meridia hcl) uzuzu uzuzu
|. Raw Sibutramine hydrochloride ntụ ntụ bụ isi Characters:
aha: Sibutramine hydrochloride
Ụdị Mkpụrụkpụ: C17H27Cl2N
Ọbara arọ: 316.31
agba: Grey ma ọ bụ na-acha ọcha crystalline Ntụ ntụ
Raw meridia hcl ntụ ntụ Ncheta dị mkpa:
1.AASraw na-enye sibutramine raw ntụ ntụ, nke nwere ike'ọtụtụ ụzọ na-emekarị ka achọpụtara gị.
2.AASraw na-enye ntụziaka na nduzi zuru ezu maka mmepụta maka kọfị kọfị, tii, jam, ihe ọṅụṅụ, wdg.
II.Sulu Sivaramine HCL (CAS 84485-00-7),
Kedu ihe na-eme ka ọ bụrụ HCL?
Sibutramine HCL (CAS 84485-00-7), nakwa n'oge na-adịghị anya a na-akpọ Sibutramine, ọ bụ ọgwụ na-enyere aka site na mgbatị site n'ịgbanwe ntanetransmitters n'ime ụbụrụ. Ọkụ Sibutramine HCL, ihe onwunwe nke Sibutramine hydrochloride, Ụdị White ntụ ntụ, ọtụtụ ndị na-ebu sistem ngwaahịa na-azụta ọcha dị ọcha Sibutramine hydrochloride, mee ya n'ụdị ụdị ọ bụla nke Sibutramine hydrochloride.
Ọrụ Sibutramine na-arụ ọrụ site n'ịmalite Serotonin na Norepinephrine etoju na ụbụrụ, ọ na-emepụta ọgwụgwọ ya site na mgbochi nke norepinephrine (NE), serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), na nkwụsị nke nta, reuptake dopamine na synapse ahụ. Site na igbochi reuptake nke ndị a na-ahụ maka ntanetịpụta, nchịkọta nke sibutramine na-amụba satty na ịchịkwa agụụ, si otú ahụ belata nri oriri, nweta mmetụta nke na-ebelata ibu.
Sibutramine HCL ntụ ntụ onunu ogwu
A na-ewerekarị Sibutramine 10-15mg oge, otu ugboro kwa ụbọchị. Soro ntuziaka nke dọkịta gị. Onye dọkịta gị nwere ike ịgbanwe oge gị n'oge ụfọdụ iji jide n'aka na ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma. Ogwu nwere ike ịbawanye na 15mg site n'aka dọkịta ahụ ruo ọtụtụ izu iji nweta mmetụta a chọrọ. A na-amụrụ ihe dị elu na 60mg. Mee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'okpuru nduzi nke dọkịta gị.
Mgbe ị na-ewe ntụ ntụ sibutramine, biko cheta iji hụ ihe ndị a:
Ejila ihe ndị na-emepụta osisi, dị ka tii, kọfị, ihe ọṅụṅụ. Sibutramine HCL ụdị ụdị acid. A ga-ebelata mmetụta nke ịkwụsị agụụ ka ọ bụrụ na ị ga-ejikọta ya na mkpokọta osisi
Ejila ya karịa afọ 2.
Biko na-agbanyekarị ọbara mgbali na mgba.
Zere ịṅụ mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-aṅụ ọgwụ.
Zere ịnara ụkwara na oyi ma ọ bụ ọgwụ nro.
Enwela ọgwụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ n'elu ngwaahịa na-abaghị uru na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị.
▲Cheta na:Kedu otu esi eme maka uru kachasị? Ị nwere ike jikọta ya na ụtụtụ na-echere 15 nkeji tupu ụtụtụ, ṅụọkwu mmiri, ị kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ iji hụ nsonaazụ n'ime izu mbụ n'iji ya.
Sibutramine HCL ntụpụ mmetụta
Ọbụna ọgwụ kachasị mma, niile nwere mmetụta dị oke aka, ya mere, ọ bụ nke a na-ahụkarị, ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ na-agụnye:
♦ dry mouth and throat
♦ iberibe, egwu, nkwụsịtụ, ọgba aghara, nchegbu
♦ nervousness ma ọ bụ mgbakasị
♦ nausea ma ọ bụ ịgba agbọ
♦ gbanwee n'omume obi (afọ ọsịsọ ma ọ bụ njigide)
♦ ịṅụbiga mmanya ókè
Mmetụta ndị ọzọ dị oke njọ gụnyere:
♦ tachycardia (ọsọ ọsọ ọsọ)
♦ ọbara mgbali elu (mgbali elu ọbara)
♦ iberibe anya
♦ isi ọwụwa
♦ dizziness ma ọ bụ nkwụsị
♦ obi mgbu ma obu nkasi obi
♦ mkpụmkpụ ume
♦ ụkwụ nwu.
Nke a anaghị agụnye mmetụta niile, biko lelee ya mgbe ị kpebiri ime ya.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta ọ bụla n'ime mmetụta ndị a, ị ga-agwa dọkịta gị ozugbo.
Nji akwa Siltramine HCL
Sibutramine bụ onye na-edozi ọnụ maka ọgwụgwọ oke. E nwere usoro ihe eji eme ihe maka otu esi eji sulu HCL sibutramine. Ụlọ ọrụ AASraw kwadoro dịka onye ọbụla:
(1)Were shellramine HCL ntụ ntụ ozugbo:
Dị ka sibutramine bụ ọgwụ na-eji ọnụ ekwu okwu, ntinye ngwa ngwa na-eso nchịkwa ọnụ. Enweghị ike ịchọta ụdị ndụ a, ma ọ dịkarịa ala, 77% nke otu mkpụrụ okwu ọnụ nke sibutramine na-etinye obi. Ya mere, were sipramine HCL ntụ ntụ na-enyere aka ọnwụ. A na-achịkwa usoro nke sibutramine na 20-30mg. A pụkwara ịgbanwe usoro ọgwụ sibutramine dịka ọnọdụ nke ahụ si dị. Ma dị ka nyocha nke ụlọ ọrụ AASraw, ọ ka mma ijide n'aka na ị gaghị ewere HCL raw powder n'elu 120mg kwa ụbọchị.
(2)Mee ka capsule ọnwụ:
Ụzọ kachasịsịsị esi jiri HCL raw ntụ ntụ sibutramine bụ nke na-eme ka HCL raw material ghọọ ibu capsule. Nke a dị mfe. I nwekwara ike itinye ihe ndị ọzọ na-emepụta na HCL na-emepụta ọnụ, dị ka lactose, glucose, starch ... wdg.
Iji hụ na mmetụta ọ bụla na-efu ọnwụ, ụlọ ọrụ AASraw na-akwado na iji ikuku na-arụ ọrụ iji hụ na ọdịnaya dị n'ime capsule nke ọ bụla iji nweta ọnụahịa a kapịrị ọnụ, na iji ngwá ọrụ na-arụkọ ọrụ iji hụ na ọgwụ na ngwa ndị ọzọ n'ụzọ zuru ezu agwakọta.
(3)Mee ka ị kọfị kọfị:
Sibutramine HCL raw material always be mixed with other ingredients (dị ka kọfị ozugbo, rose ntụ ntụ, lactose, eri dietary ...) iji mee ka slimming kọfị.
Were ụbọchị zuru oke: gị n'ụsọ osimiri, na Hawaii dịka ọmụmaatụ, na ụtụtụ mara mma, ị gaa ụlọ ahịa kọfị na onye nlekọta na-enye obi ụtọ na Hawaii na-enye gị iko kọfị ọkụ. Ọ dị ebube. Ugbu a, ị maara na ị na-eri nri dị mma na ezigbo ọzara, na pizzas ... ma tupu ịla n'iyi ezumike a, ị nụrụ na kọfị ị na-aṅụ kwa ụtụtụ na-eme ka ị ghara ibu ibu. Ugbu a gwa m, ọ bụghị ihe magburu onwe ya? Ịchọrọ ịzụta kọfị a ma ṅụọ ya kwa ụbọchị maka oge ndụ gị niile.
Ma, e nwere ụfọdụ ajụjụ nke iji eriri HCL sibutramine mee ka ọ kọfị kọfị. ASraw chọpụtara na, ụfọdụ ndị na-emepụta kọfị kọfịka na-eme mkpesa na ha zụrụ HCL ihe ndị dị na HCL skelamramine ndị ọzọ ma ọ bụ zụta HCL ihe ndị dị na ntanetị. Ha na-azụta HCL ihe ndị dị mkpa n'igwe ma na-eji ya eme ka kọfị kọfị ma ọ bụ kaadị ma ọ bụ kaadị na-egbuke egbuke, ma ọ nweghị mmetụta ọ bụla. Kedu ihe mere na a na-enwe mmetụta ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya?
AASraw na-eme ule ahụ ma nweta nsonaazụ. Nke mbụ, ị na-azụta ihe nkwonkwo HCL adịgboroja, dịka anyị niile maara nke ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-azụ HCL sulu na ahịa, ma ọ bụrụ na ị maghị otú e si achọpụta HCL raw materials bụ ezigbo mma ma ọ bụ, ọ dị oke dị mfe ịzụta sistem sibutramine ntụpọ n'Ịntanet. Ọ siri ike ịchọta akwa àgwà sibutramine HCL raw ntụ ntụ na ahịa.
Ọ bụrụ na mmanụ aṅụ HCL gị na-abụghị nke adịgboroja, ọ ga-abụrịrị ihe kpatara ya na ihe mere sel HCL sibutramine enweghị mmetụta ọ bụla. N'ahịa, ụdị sibutramine a kasị ahụkarị bụ ụdị nnu hydrochloride, ma kọfị ma ọ bụ tii bụ ụdị alkaline, na-emepụta hydrochloride nke sibutramine, neutralization acid-base, belata ma ọ bụ na-eduga n'adịghị uru nke ngwaahịa. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ iji kọfị kọfị ma ọ bụ tii na sibutramine, ọ ga-abụrịrị na ị ga-esi edozi sibutramine dị ka kọfị na tii.
▲Cheta na:anyị ga-echetara ndị na-emepụta ihe ndị na-akpata ọnwụ (tii ihe oriri, kọfị na-ebu ibu, jelii nri, wdg) na ndị na-emepụta kwesịrị ịṅa ntị n'ihe ndị na-esonụ:
Chịkwaa ogo nke acid na alkali nke ngwaahịa ahụ, ka ọ ghara igbochi nnu ka ọ ghọọ nnu na mmiri acid, na-akpata ngwaahịa na-adịghị mma;
Sibutramine enweghi ike agwakọta ya na mkpokọta osisi, ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo di ike, ebe sibutramine siri ike acidic, o ga-abuo mgbe o gwakọtara ya.
Ọ bụrụ na ịtinyeghị ntụziaka ndị ọzọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị ga-enwe mmetụta ndị doro anya: njigide, ntụpọ na ihu gị, ume ume, wdg.
Nye ndụmọdụ na ịmepụta Sibutramine HCL ntụ ntụ (Ime naanị gị)
Banyere sibutramine hydrochloride Ndị ahịa na-eji ngwọta nzaghachi (Ntụziaka bụ maka ntụkọ naanị):
(1) Ngwaahịa anyị bụ sibutramine hydrochloride, 99% dị ọcha, ọkwa ọgwụ.
Usoro a na-ejikarị eme ihe n'ahịa:
Akwukwo ihe ndi ozo na akwukwo ogwu, akwukwo ihe otutu, akwukwo ohia na ihe ndi ozo, ihe ndi ozo bu ihe alkaline bekee, na ohia nke hydrochloride sibutramine, ndi mmadu na-eme ka mmiri ghara ikpochapu ya.
b. Ntughari ojiji nke sibutramine hydrochloride, ọdịnaya ọ bụla nke capsule 20-30mg, nkwụsị kwa ụbọchị karịa 200mg.
c. Site na ahịa ọgwụ, a na-atụ aro na iji mkpụrụ osisi greepu na shuga na-emepụta hydrochloride na-emepụta ihe, nke a na-atụ aro 30mg.
(3) Aro maka mmepụta ngwa:
Ojiji nke ikuku ikuku na-ejuputa ngwa oru iji jide n'aka na ihe di n'ime ihe odide nke obula iji mezuo uru a.
b. Ojiji nke ngwakọta akụrụngwa iji hụ na ọgwụ na ngwa ndị ọzọ na-agwakọta ya.
(4) Banyere ule
A na-atụ aro ndị ahịa ka ha jiri ngwaahịa anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ Annex University nke na-eme nnyocha n'ụlọ ọgwụ, na akụkọ nyocha nke na-ede na ụlọ ọrụ AASraw, nwere ike ịkwụghachi ụgwọ maka ule nyocha na ọnụahịa nlele.
III. Raw Sibutramine hcl ntụ ntụ HNMR
Sibutramine: Ihe abụọ ị ga-ama Sibutramine (Meridia) maka ịgwọ oke oke Ebee ka ịzụta irighiri Sibutramine (Meridia) Sibutramine: Ọrụ, Ọkpụkpụ na mmetụta dị na ya
Sibutramine: Kedu Mma Ọ Na - arụ? 5ways mara Sibutramine Ọnụ ego Sibutramine na otu esi zụta ntụ ọka sibutramine
Nkowa gbasara ngwaahịa bara uru, nabata iji pịa ebe a.
6 reviews maka Sibutramine hydrochloride ntụ ntụ
Jonny - 01 / 31 / 2018
Achọtara m ya abụọ ma ọ bụ ndepụta aha ya, ihe Sibutramine ga - egosi na ọ dị mma .Ọ na - enyekwara m aka ịgbasa ahịa nke azụmahịa m.
George - 01 / 31 / 2018
Ọkụ Sibutramine na-enweta obere ilu, na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ya mere m ga-akwado ma dee nyochaa. Ekwenyeghi banyere usoro ogwu Sibutramine, nke a na-enyocha na Sibutramine. M tinye 20mg Sibutramine raw ntụ ntụ n'ime kọfị, na-aṅụ 2 iko kwa ụbọchị, nakwa na mmega ahụ 3 ugboro n'izu. Enwuru m 10lb. Hụ ogwu Sibutramine na AAS.
Sofie - 01 / 30 / 2018
Ana m eji Sibutramine ntụ ntụ ihe karịrị otu ọnwa ugbu a. Ihe ngosi Sibutramine na-egosi, Ntuola 3 funahụrụ m !!!! Agaghị m emega ahụ.
Lisa - 01 / 19 / 2018
Enwere m ihe na-abaghị uru ngwaahịa supplier.2 ọnwa gara aga, m zụtara Sibutramine ebe a.
Mgbe o jesịrị nkọwa dị ka Sibutramine, usoro ihe omume, usoro ọgwụ Sibutramine, ahọrọ m ya.And Siramramine Ihe nkwụsị ọnwụ na-egosi na m mere mkpebi ziri ezi.
Mgbe a nwalere m, ana m etinye ya na ọgwụ nri Sibutramine ma ree ndị ahịa m.
Nyocha ndị m nwetara site na ndị ahịa m bụ Sibutramine nyeere ha aka ibu Ọnwụ .Ọ na - arụ ọrụ nke ọma. Ugbu a, ọ na - aghọ ahịa anyị na - ere ere.
Dr. Patrick Young - 12 / 05 / 2017
Doc Patrick Young - 12 / 01 / 2017
Synephrine ntụ ntụ
Bupropion HCL ntụ ntụ
Nootropics ntụ ntụ (17)
Nandrolone ntụ ntụ Usoro (10)
Testosterone ntụ ntụ (14)
Estradiol ntụ ntụ Usoro (8)
Mmekọahụ Mmebi Hormones (15)
Nwoke Jiri (6)
Ọla abụba (34)
Ọgwụ PCT (9)
Osisi wepụ (1)
ndị ọzọ na- (22)
Ngwá ọgwụ Alzheimer J147: Ngwụrụgwụ Curcumin Na-ewepụta J147 Neurotrophic Compound
ga- on Zụrụ elu dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ online: Ihe niile ị kwesịrị ịma !!!
Igwe Igwe on Zụrụ S4 (Andarine) Ngwá ojii Online | Ihe Ị Chọrọ Ịma